Moments Neshamwari 42
Une nguva muzvikamu zvayo mumakore, mwedzi, masvondo, mazuva, maawa, maminitsi nemasekondi chero nyanzvi nehupenyu kana humwe hutano mumuviri womunhu? Kana zvakadaro, chii chinowirirana?
Pane kuwirirana chaiko pakati pezvimiro zvenguva yenguva nekutenderera kwezuva, mwedzi nemapuraneti uye nemimwe maitirwo emuviri mumuviri wemunhu, asi chikamu chinogadzirwa neyemakanika contrivances yemunhu hachina kunyatsoitika.
Iko zvakasikwa sezvese zvinomiririrwa nezvose zvinogona kuvonekwa kana kunzwisisika pamatenga kana nzvimbo; ichi chisikwa chinoenderana nemuviri wemunhu; nyeredzi masumbu, semuenzaniso, anoenderana nerves uye ganglia mumuviri. Zuva, mwedzi, pasi, uye nyeredzi inonzi mapuraneti aine masetilaiti kana mwedzi, zvinofamba mumhepo dzazvo.
Kutaura nezve kana kufungidzira nguva "yekutevedzana yezvinhu zvakasikwa," yakamisikidzwa nekufamba kwezvinhu zvinonzi zvisikwa zvekumatenga muchadenga, uye shanduko nezviitiko zvinogadzirwa zvine hukama nepasi, pane kuwirirana pakati peizvi phenomena uye yakajairika muviri wemunhu nemaitiro ayo epanyama uye shanduko nemhedzisiro yakagadzirwa ipapo. Asi hazvina kunaka kuchengeteka kwedu kuti tinowana izvi zvinhu; kuti tirege kuvhura bhokisi raPandora.
Izvo zvakakosha uye zvakakwana kuti tizive kuti kune hutachiona huviri mumuviri wemunhu hunomiririra uye inoenderana nezuva uye mwedzi. Iyo generative system iri mumuviri inoenderana uye inoenderana neyakagadziriswa. Asi mutezo wega wega uri muchigadziro chezuva une zvawo nhengo dzinoenderana mumuviri. Mbeu neivhu riri muhurongwa hwokugadzira zvinhu ndizvo zvakakonzerwa nekuita kwemitezo iri mumuviri inoenderana nezuva uye mwedzi. Chinhu icho kana chakabudiswa chinobva pachiito chemitezo, zvinoenderana uye zvine chekuita nemapuraneti, vanoita basa ravo kuburikidza nehurongwa hwakasiyana hwemuviri, uye vese vanoshanda pamwechete muhupfumi hwese hwemuviri munguva yepamoyo yavo, kuitira kuti iro basa rehupenyu hwepamuviri riitwe.
Iko kune mumuviri nheyo iyo inomiririra uye inoenderana nezuva. Izvi zvinopfuudza zvichikwira kana kutenderedza muviri, sezvo zuva richinzi roita denderedzwa rimwechete kuburikidza nezviratidzo gumi nembiri zve zodiac. Kubva pane chiratidzo aries chinoenderana nemusoro wemunhu, zasi nenzira yechiratidzo chegomarara, inoenderana mazamu kana chipfuva, kune chiratidzo chakabatana nenzvimbo (kwete nhengo) dzepabonde, uye kumusoro nenzira yeshinda capricorn, zvinoenderana nemuzongoza mudunhu remoyo, uye nekudzoka zvakare kune aries musoro, unopfuura nehutachiona kana zuva rechitunha kuburikidza nezviratidzo zve zodiac munguva yerimwe zuva rekufamba kwezuva. Iko mune mumuviri imwe hutachiona inomiririra mwedzi. Hutachiona hwemwedzi hunofanirwa kupfuura nemese zviratidzo zveZodiac yayo. Nekudaro, zvakadaro hazvisi izvo zvinowanzoitika. Zodiac yemwedzi haizi zodiac yechadenga. Mwedzi unoita shanduko kuburikidza ne zodiac yake mumuviri mumakumi maviri nemapfumbamwe uye mazuva mashoma, unoenderana nemwedzi wekugara. Kana mwedzi wazara iwo uri muiyoes yayo zodiac uye inoenderana nehutachiona mumuviri unofanirwa kunge uri mumusoro; Chikamu chekupedzisira igomarara rezodiac yaro uye chipfuva chemuviri; rima remwedzi rinotendeuka kuenda kumwedzi mutsva ndiro libra yaro zodiac uyezve hutachiona hwacho mumuviri huri mudunhu rekurara. Muchikamu chekutanga chemwedzi chiri mukati mechekecheteni uye hutachiona hwemuviri hunofanirwa kunge hwakamira parutivi rwemisana, uye kubva ipapo hutachiona hwemuviri hunofanira kupfuura kumusoro, kana mwedzi wazara muchiratidzo chake . Saka gore remuchadenga nemwedzi unozvarwa unoiswa muviri nekufamba kwevanomirira hutachiona kuburikidza nemuviri.
Vhiki ingangove yakare ndiyo chiyero chenguva yekare pane chero khalenda yevanhu. Izvo zvakanyorwa mumakarenda evanhu vekare-kare. Vanhu vemazuva ano, zvakafanira, vanozvikwereta kubva kwavari. Zuva rega rega revhiki rinoenderana nezuva, mwedzi uye mapuraneti, kubva kwavari iwo mazuva anotora mazita avo. Hupenyu hwemuviri wemunhu hwakafanana nekuratidzwa kumwe kwechinhu chezuva. Vhiki riri mumuviri wemunhu rinoenderana mune diki chiyero zvakafanana.
Zuva, rinova rekuchinja kwepasi kamwe chete pamharidzo yayo, ndeimwe yenguva nomwe dzevhiki, uye mariri nguva hombe inomiririrwa zvakare. Mumuviri wemunhu, hutachiona kana musimboti unoenderana nepasi unoita imwe yakakwana kutenderera kuburikidza nehurongwa hwayo chaihwo, inoenderana nekushandurwa kwepasi. Izvi zvinyorwa, mwaka wezuva nemwedzi, mwedzi unoverengeka, vhiki, zuva nekushanda kwemuviri wemuviri wemunhu, rinopera nezuva. Kune mamwe matanho madiki madiki e "ratidziro yezvinhu zvakasikwa" anoenderana chaizvo nezvinhu uye mashandiro mumuviri wemunhu. Asi kune iyo awa, miniti uye wechipiri, panongogona kunzi rudzi rwefananidzo pakati pezvose uye zvemuviri zvakati mhando yekufananidza pakati pezvose zvakasikwa uye zvemuviri zviitiko. Awa, miniti uye wechipiri zvinogona kunzi zvakafanana matanho zvazvino. Kana chiyero chinonzi chepiri chakabvumwa zvaifungidzirwa kuti zvaive zvipfupi pfupi nguva hapanombofi chave kudikanwa kwekuyedza kuikamura. Sayenzi yemuviri yakaita chikanganiso chimwechete pavakapa zita reatomu kuzvikamu zvemaminitsi ezvavavaiona sechinhu chepamberi. Gare gare ivo vakawana yega yea "maatomu" kuve chisikwa chidiki mukati mayo, mapoka avo avakanzi ma elekitoni, ion, kunyangwe zvingangoita ion harisi rekupedzisira chikamu. Muviri wemunhu unorongeredzwa uye uye unofanirwa kuita zvinoenderana nechero zvakasikwa, asi zvisingaite munhu anopindira nemasikirwo emuviri nemaitiro akajairika. Ipapo anobva apinda munyatwa. Kurwadziwa, kutambudzika uye chirwere ndiwo mhedzisiro, ayo ari masikirwo maitiro emuviri mukuedza kwechisimba kuti adzorere akajairwa mamiriro. Aya maitiro ari mumuviri wemunhu ane yawo kuenderana nemakakatanwa uye cateclysms mune zvakasikwa, kuchengetedza kuenzana. Kana murume mumuviri wake achishanda pamwe uye kwete zvakanyanya zvakapesana nehunhu anogona kudzidza zvinonyatsoenderana pakati pechikamu chimwe nechimwe chemuviri wake uye chikamu chake chinoenderana muchadenga nemashandiro avo ekudzoreredza.